एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु : के भन्छ सिआइबीको रिपोर्ट ?
Sun, May 27, 2018 | 23:30:38 NST
07:01 AM ( 10 months ago )
काठमाडौं, साउन २५ – काभ्रेमा साउन ६ गते राति ८ बजेतिर टुकुचा नाला डुुडामुखका ६५ वर्षे हरिभक्त दाहाल, उहाँकी श्रीमती ६० वर्षकी हरिमाया दाहाल, छोरा ३२ वर्षका राजाराम दाहाल र छोरी २५ वर्षकी रन्जना दाहालको ज्यान गएको २० दिन भइसकेको छ ।
दाहाल परिवार काभ्रेको बनेपास्थित पुरानो बसपार्कमा होटल (गौतम भोजनालय) सञ्चालन गर्दै आएका थिए । होटल सञ्चालन गर्दै आएका एकै परिवारका चार जनाको ज्यान गएपछि घटना निकै दर्दनाक र रहस्यमय भएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआइबीको टोली अनुसन्धान गर्न त्यसै दिन घटनास्थल बनेपा पुरानो बसपार्क पुगेको थियो । सिआइबीको अनुसन्धान टोलीले घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।
के भन्छ सिआइबीको प्रतिवेदनले ?
सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार काभ्रे घटना आत्महत्या भएको ठहर छ । घटनास्थल सुरक्षित भएको बेला प्रहरी पुगेको र घटनाको प्रकृति हेर्दा घटना हत्या नभई आत्महत्या भएको सिआइबीको अनुसन्धानले बताएको सिआइबीको निमित्त प्रमुख तथा एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
आत्महत्याको कारण सम्पत्ति र घरायसी विवाद देखिएको छ । ३२ वर्षका राजारामका दुई श्रीमती छन् । जेठी श्रीमती कमला र कान्छी श्रीमती पूजा हुन् । दुई श्रीमती रहेका राजारामको परिवारमा अशंबन्डा सम्बन्धी विवाद थियो । राजारामका बुबा हरिभक्तले श्रीमती हरिमायाको नाममा केही सम्पत्ति राखेका थिए ।
हरिभक्तका बुहारी तथा राजारामकी कान्छी श्रीमती पूजाले सासु ससुरालाई प्रभावमा पारेर सासू हरिमाया दाहालको नाममा रहेको सम्पत्ति २०७३ मंसिर ७ गते आफ्नो नाममा बकसपत्र गराएकी थिइन् ।
सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएको दुई दिनपछि राजारामकी श्रीमती पूजाले राजारामसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरे पनि उनी श्रीमतीकै रुपमा राजारामसँग बसेकी थिइन्।
घटना हेर्दा सम्पत्ति लिनका लागि सम्बन्ध विच्छेद गरेको र पछि श्रीमानसँग मिलेर बसेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । छोरो राजारामले दोस्रो विवाह पूजासँग विवाह गरेको १० दिनमै बुबा हरिभक्तले आफ्नो नाममा रहेको टुकुचा नाला गाविस ८ को एक रोपनी जग्गा २०६२ साल भदौमा बकसपत्र गरेका थिए ।
राजारामले कान्छी श्रीमती पूजालाई नै २०७३ मंसिर ७ गते आमा हरिमाया दाहालको नाममा रहेको उग्रचण्डी नाला ६ को ५ रोपनी ८ आना जग्गा बकसपत्र गराएका थिए ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै कान्छी श्रीमती पूजाले सम्पत्ति जति आफ्नो नाममा पारेको देखिएको छ । त्यस्तै काभ्रेको साविकको दक्षुटोल १ मा रहेको दुई आना भन्दा बढी जग्गामा बनेको तीनतले घर समते पूजाले आफ्नो नाममा पारेकी थिइन् । एकपछि अर्को गर्दै सम्पत्ति आफ्नो हातमा पारेपछि जेठी श्रीमती र उनका छोराले आफ्नो सम्पत्तिमा दाबी नगरुन् भन्ने देखिन्छ ।
उता जेठी श्रीमतीले छोरो ठूलो भएपछि पूजाको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत लिने धन्दै धम्की दिने गरेको देखिन्छ । कान्छी जसरी पनि सम्पत्ति जति आफ्नोमा पारेर जेठीलाई छुन नदिने जेठी जसरी पनि कान्छीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति लिने भन्दै यसै बारेमा उनीहरु बिच बारम्बार झगडा हुने गरेको सथनीय बासिन्दाले बताएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेठी र कान्छीको विवादका कारण राजाराम, उनका बुबा, आमा मानसिक तनावनमा आउने गरेको देखिन्छ । घटना हुने दिन पूजाले नन्द रञ्जनाको विवाहको कुरा निकालेकी थिइन् । विवाहको कुरा निक्लिएपछि परिवारमा विवाद भएको थियो ।
‘परिवारमा विवाद भएपछि म मर्छु भन्दै कान्छी श्रीमती छोरो लिएर हिँडेकी थिइन् । श्रीमती मर्छु भनेर हिँडेपछि मानसिक तनावमा आएको दाहाल परिवारका एकजनाले सुरुमा म पनि मर्छु भन्दै विष खाएको र त्यसो भए म पनि मर्छु भन्दै धमाधम अरुले पनि विष खाएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ’ एसएसपी बस्नेतले भन्नुभयो ।
घटनाका बारे राजारामका जेठी र कान्छी श्रीमती, स्थानीय बासिन्दा, तरकारी पसलवाला लगायत दर्जनभन्दा बढी मानिसलाई सोधिएको र उनीहरुको कुराबाट पनि विवादबाट मानसिक तनावमा आएर घटना हुन गएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तो भएको थियो आत्महत्याको दिन
नन्दको विवाहको कुरामा विवाद भएपछि पूजा मुर्छ भन्दै घरबाट निस्किएर दिदी सुशीलाकोमा गएकी थिइन् । श्रीमती मर्छु भन्छै घरबाट निस्किएर गएपछि राजाराम तनावमा आएका थिए । होटलमा आएका ग्राहकलाई समेत रुखो व्यवहार गरेका थिए । तरकारी ल्याउने पसलमा गएर भोलिदेखि तरकारी ल्याउनु पर्दैन भन्दै होटलमा आएका थिए । बेलुका झण्डै ७ बजेतिर सटर बन्द गरे र ताला लगाए । दुबै ढोका बन्द गरे । सटर बाहिर सिसा फुटेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरियो , सटर फुटाएर हेर्दा चारै जना मृत अवस्थामा भेटिए ।
यस्ता छन् आत्महत्या हो भन्ने प्रमाण
प्रमाण १- सटर लक
घटना बेलुका झण्डै ८ बजे भएको थियो । होटलको सटर बाहिर सिसाका टुक्रा देखेपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । काभ्रेका प्रहरी निरीक्षक अनिल घिमिरेको प्रहरी टोली तुरुन्त घटना स्थल पुगेको र आधा घण्टा लगाएर सटर फोडेर भित्र पसेको थियो । सटरभित्रबाट कोठामा जाने ढोका पनि लक गरिएको थियो । कोठामा छोरी रञ्जनाको शव टेवलमा र अन्य तीन जनाको भुइँमा मुखबाट फिज आएको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । सटरको ताला लगाउन भित्रबाट होटलको सोकेसको सिसा फुटाएर हात छिराई ताला लगाएको हुन सक्ने सिआइबीले जनाएको छ । दुबैतर्फका ढोका बन्द गरेर भित्र चारै जना मृत अवस्थामा भेटिएकाले आत्महत्या हुनसक्ने सिआइबीको अनुसन्धान छ ।
प्रमाण २- भोलिदेखि तरकारी नल्याउनु
होटल सञ्चालक ३२ वर्षे राजाराम दाहालले सधैं तरकारी ल्याउने पसलमा गएको र भोलिदेखि तरकारी नल्याउन भनेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आज राति आत्महत्या गर्दैछु भन्ने योजना अनुसार राजारामले तरकारी ल्याउने पसलेलाई तरकारी नल्याउन आग्रह गरेकाले पनि आवेशको योजनामा आएर आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘म आज मर्दैछु, भोलिबाट होटल बन्द हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता भएपछि तरकारी नल्याउन समेत आग्रह गरी आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आम्रो अनुमान हो’ एसएस्पी बस्नेतले भन्नुभयो ।
प्रमाण ३- विषको भाँडो
घटना भएको कोठाका सामानहरु छरपस्ट थिएनन् । तीन जना भुइँमा लडेको र एकजना टेवलमा लडेको अवस्थामा भेटिएका थिए । ‘तरकारी ल्याउने पसलमा गएर तरकारी नल्याउनु भनेपछि राजाराम औषधि पसल गएको र आफैं सेलफस नामक विष ल्याएको हुनसक्ने देखिन्छ’ सिआइबीको अनुसन्धानमा भनिएको छ । ‘सेलफस विष राजाराजम आफैंले किनेर ल्याएको हो वा होइन भन्ने बिक्रेताले समेत डरले भन्न नसक्ने भएकाले औषधि कसले कहाँबाट किन्यो भन्ने खुल्न नसकेको छैन’ एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो । विषको रित्तो भाँडोसँगै कोठाभित्र एकलाख रुपैयाँ समेत फेला परेको थियो ।
यस्तो थियो दाहाल परिवार
काभ्रेको टुकुवा नालाका राजाराम दाहालले २०६० सालमा कमला गेलालसँग विवाह गरेका थिए । अहिले कमलाका १४ वर्षकी छोरी र १३ वर्षका छोरा छन् । छोरा जन्मिएको २०/२२ दिनपछि राजारामले पूजा गौतमलाई दोस्रो श्रमती बनाएका थिए । कान्छी श्रमती ल्याएपछि जेठी श्रीमती आफ्ना छोराछोरी लिएर नालामै बस्दै आएका छन् ।
उता कान्छी श्रमती ल्याएपछि राजाराम विदेश गएको विदेशबाट फर्किएपछि होटल सञ्चालनमा लागेका थिए । होटलबाट कमाएको पैसाले राजारामले बनेपामा घर बनाएका थिए । त्यही घर र अन्य सम्पत्ति आफूले पनि पाउनु पर्ने भन्दै जेठी श्रीमती कमला र कान्छी श्रीमती पूजाबिच झगडा हुने गर्‍थ्यो । यही सम्पत्तिकै कारण अन्तत चारै जनाको ज्यान गएको प्रहरीको अनुमान छ ।